Vaovaon'ny orinasa - Vaovao - Shenzhen Wudongfang Culture Communication Co., Ltd.
an-trano > Vaovaon'ny orinasa
Inona no fiantraikan'ny fianarana baleta amin'ny vatanao?
Ny fianarana baleta mandritra ny fotoana ela dia afaka mitarika olona manana toetra tsara tokoa, izay antony lehibe iray ihany koa hidiran'ny olon-tsotra bebe kokoa amin'ny baleta. Saingy ny tombony azo amin'ny fianarana baleta dia be lavitra noho ny fiovan'ny toetra, ka inona no vokatr'izany eo ami......
Amin'ny firy taona no manomboka mianatra milay kokoa ny zaza?
hildren dia afaka mianatra baleta manomboka amin'ny taona 4 ka hatramin'ny 15, aorian'ny faha-10 taonan'ny rantsan-tongony, fa miaraka amin'ny fomba fanofanana mety dia afaka mandroso ny zaza amin'ny taona.
Inona no atao hoe akanjo balaonina tutu?
Androany ny sekoly dia hanome anao fampidirana fohy ny volon'ny tutu.
Zipo ballet Tutu, tsara tarehy efa an-jatony taona maro
Ny zazavavy rehetra dia manana nofinofy mahafinaritra momba ny zipo. Tutu zipo ny ballet dia zipo izay afaka manome fahafaham-po ny sary an-tsaina tsara tarehy zazavavy rehetra. Fluffy sy maivana, ny zazavavy rehetra manao zipo tutu tsara tarehy dia azo antoka fa haka sary an-tsaina ny tenany ho ang......
Fampidirana ny fitehirizana sy ny fitehirizana TUTU ballet
Ity lahatsoratra ity dia momba ny fitehirizana sy ny fivezivezena tutu. Ny fomba tsara indrindra itondrana akanjo tutu dia ny fametrahana azy ireo ao anaty kitapo manokana. Raha tsy izany dia mora ny manimba tutu ballet raha mitondra azy tsy ara-dalàna. Raha tsy azo atao ny mitondra ny tutu dia azon......
Tany am-piandohan'ny vanim-potoanan'ny Ballet Romantic dia nanomboka nitazona fironana lamaody ny akanjo vita amin'ny lamaody, toa ny volon'i "fairy" an'i Tarrioni sy ny fitafiana «fairy», ary nirohotra naka tahaka ny fombany ireo vehivavy Paris, niaraka tamin'ireo mpamorona lamaody nampiditra "satr......